Mashiinnada tolida Toyota: moodooyinka, isbarbardhigga iyo in ka badan!
Isbarbardhigga moodooyinka mashiinka tolidda Toyota
Ku habboon mashiinnada tolida ee soo socda: Carina, Lidl, Aldi, FIF, TCM, AEG, Privileg, Janome,...
Xadhkaha mashiinada tolida ee guriga
Dhererka: 1,50 m
YDK Kantaroolka Pedaalka Cagaha...
Kantaroolka cagta ee YDK ee mashiinka tolida
mashiinka tolidda lagu tumanayo
In kasta oo hadhow aynu si qoto dheer u arki doono sifooyinka nooc kasta oo ka mid ah mashiinka dharka toyota, shaxdan isbarbardhigga ahi waxay u adeegi doontaa soo koobid si loo ogaado midka ugu habboon waxa aan raadineyno iyadoo lagu saleynayo qiimaha iyo faa'iidooyinka.
Waxay u muuqataa in dharka dhumucdiisuna ay badbaado ku yihiin noocyadan mashiinnada tolida Toyota. Baaqa Toyota 34B Super Jeans mashiinka, waxa uu horeba u caddeeyey oo kaliya in la xuso magaciisa. Dharka ayaanan caqabad u noqon doonin iyada, taas lidkeeda. Laakiin waa taas marka lagu daro, waxay leedahay wadar ahaan 34 tol. Wax ku fiicnaan doona si aad awood ugu yeelatid inaad sida ugu fiican uga faa'ideysato shaqooyinka kale.
Taasi waa sababta ay aad ugu fiican tahay kuwa horeba u lahaa fikrado aasaasi ah oo ku jira mawduucan. Waxay leedahay muuqaal ballaaran oo cirbadaha ah, iyo sidoo kale matoor awood leh.
qiimihiisu waa qiyaastii 190 euro iyo halkan waad ka iibsan kartaa
Raaxo badan, aad u ballaadhan iyo, dabcan, doorasho wanaagsan ma aha oo kaliya denim. Sidoo kale maqaarku wuxuu ku jiri doonaa gacmo wanaagsan iyada. The mashiinka tolida Toyota SuperJ17 XL Allround Waa dhiirigelin wanaagsan si aad u dhamaystirto dhammaan shaqooyinkaaga lagu sameeyay dhowr lakab oo dhar ah. Dhammaystir xirfad leh, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxaysato 15 barnaamij oo tolid. Ha iloobin in kiiskan aanu wajahayno mishiin awood leh.
Sida aan soo sheegnay, waxay leedahay aag weyn oo awood u leh in si fiican loo arko irbadda. Intaa waxaa dheer, waxay awood u yeelan doontaa inay ku tosho dun dhumuc weyn waxayna kaa caawin doontaa badelka.
Waxaas oo dhan qiimo dhan 156 euro. Haddii aad xiisaynayso, waxaad ka iibsan kartaa Toyota SuperJ17XL mashiinka dharka lagu tolo Toyota 34B Super Jeans Machine Tolida, Black
Kani waa mishiinka tolida toyota xirfadda leh. Waxay noqon doontaa maalgashi wanaagsan, laakiin waxaan u tixgelineynaa taas kaliya kiisaska gaarka ah qaarkood. Si kale haddii loo dhigo, waa mashiin aad u adkaysan kara, wuxuuna xamili karaa in ka badan 12 lakab oo dhar ah. Markaa haddii aad ka fikirayso hagaajin dhammaan qaabka jiinisyada, waxay noqon doontaa doorashadaada ugu fiican.
Laakiin dhanka kale way yara soo dhacdaa. Waxay leedahay 15 tol oo kaliya, afar ka mid ah waa qurxin mana kala beddeli karno dhererkooda iyo ballacooda. Intaa waxaa dheer, bobbins ma aha nooca caadiga ah. Waxaad isticmaali kartaa oo keliya kuwa rasmiga ah ee astaantan inkastoo ay tahay inaad ogaato in Toyota SuperJ15 keen saddex, kuwaas oo shaki la'aan noqon doonaa in ka badan ku filan.
Qalabka ka mid ah qalabka waxaad sidoo kale ka heli doontaa dhowr cagood oo riixaya, baallaha elektaroonigga ah ee aan la waayi karin, iyo sidoo kale laba baakadood oo irbado gaar ah oo loogu talagalay jeansiinta iyo mid kale oo ka mid ah cirbadaha caadiga ah.
qiimihiisu waa ilaa 166 yuuro waadna awoodaa halkaan kula kulan
Mar labaad, waxaan u tagnaa mashiinka loogu talagalay in lagu tolo dhar-dhuuban, labadaba denim iyo maqaarka. Laakiin kiiskan, kaliya uma adeegi doonto taas. laakiin in ay 26 tol, waxay ina siin doontaa fursado badan oo kale. Intaa waxaa dheer, waxay horeba noo soo bandhigtay xeerar dhererka isku mid ah, wax aan la heli karin moodooyinka kale.
Waxay leedahay miiska fidinta si ay shaqadaada uga dhigto mid raaxo leh. Haddii aan ka hadalno tas-hiilaadka, iyaga ka mid ah waxaan muujineynaa gacanta xorta ah iyo iftiinka lagu daro. Waxaa ku jira cirbadaha beddelka ah ee labada dhar qaro weyn iyo kuwa aasaasiga ah.
Xaaladdan oo kale, mashiinka tolida ee Toyota SuperJ26 waxaa lagu qiimeeyaa ku dhawaad ​​184 euro waana karaas halkan ku noqo.
Toyota SUPERJ26 agagaarka...
Xaaladdan oo kale, waxaan leenahay Toyota SPB15 mishiinka tolida. Waxaan dhihi karnaa in ay leedahay tayo sare leh iyo in ay u fiican tahay kuwa bilowga ah. Inkastoo, ay sidoo kale fure u noqon doonto kuwa kale ee horeyba u lahaa khibrad yar. Waxeey heesataa 15 nooc oo tolmo ah aad bayna u fududahay in la isticmaalo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ha ka welwelin sababtoo ah isla mashiinka, waxaad haysataa nooc ka mid ah soo koobid muuqaal ah oo ku saabsan wax kasta oo ugu muhiimsan iyo tallaabooyinka la raacayo.
Kala xisaabtan cudud bilaash ah iyo naqshad ergonomic. Waa in la ogaadaa in tallaabada dunnidu ay si fudud u fuliso mashiinka noocan ah. Waxa kale oo aad haysataa afar nooc oo tolmo qurxin ah, tolmo cidhif ah iyo saddex tolmo oo toosan oo halkan ku leh dherer kala duwan. Qalabka ka mid ah waxa aanu muujinaynaa laba bobbins, labadaba cagaha riixaya ee aasaasiga ah iyo batoonka iyo sidoo kale xad-dhaafka. Sidoo kale ma ilaawi karno baallaha.
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan mishiinkani waa qiimihiisu aan la adkaysan karin oo ka sarreeya 110 euro. Haddii aad xiisaynayso, waad awoodaa halkan ka iibso
Sida xiisaha, waa in la sheegaa in naqshadeeda ay dhiirigelisay sawirada Japan. Mashiinka tolida ee Oekaki 50G waxaad ku siin kartaa male-awaal bilaash ah. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah mishiinnada ugu dhammaystiran ee aan haysanno.
Kala xisaabtan 50 nooc oo tolan oo waxaad go'aansan kartaa inta u dhaxaysa barnaamijyadan tooska ah ama kuwa gacanta ah. Marka aan ka hadalno qaabka Oekaki, waa inaan sidoo kale sheegnaa inay tahay a dhammayn tolnimo bilaash ah.
Waxaad dooran kartaa ballaca iyo dhererka tolida, iyo sidoo kale xawaaraha iyo wax kasta oo aad rabto. Waa mashiin-xirfadeed-xirfadeed, marka laga soo tago dhammaan hawlihiisa, waxa uu ku qalabaysan yahay qalab aan dhammaanayn sida afar bobbins, dhawr cagood oo riixaya iyo irbado dhumucyo kala duwan leh.
qiimihiisu waa ku dhawaad ​​410 euro iyo waxaad ka iibsan kartaa halkan.
Toyota ECO15B oo dhan
Haddii aad rabto a mashiinka tolida Toyota aasaasiga ah, kani adigaa lahaan doona. Waxay leedahay wadar ahaan 15 nooc oo tolmo ah. Tol toosan, zigzag iyo tolmo qurxin. Waa mishiin si cadaalad ah is haysta, sidaa awgeed isticmaalkeedu sidoo kale aad buu u fudud yahay. Taas awgeed, waxaynu odhan karnaa isaga ayaa masuul ka ah qabashada shaqooyinkaas yar yar ee wakhtiga ku haboon. Dabcan, haddii aad raadineyso wax xirfad leh, waxaad haysataa moodooyinka hore.
Tillaabooyinka lagu awoodo in dunta lagu dhejiyo sidoo kale waxay ku midaysan yihiin qaabka sawirka waxayna la socotaa qalabyada sida kuwa kale ee la socda.
Dhammaan kuwan kor ku xusan waxay kugu noqon karaan 154 euro oo keliya, markaa dhaqso oo soo iibso Toyota ECO15B Halkan.
Toyota ECO15B oo dhan...
Waxay leedahay a wadarta guud ee 26 tol iyo dun si toos ah. Waxay leedahay ilaa 15 tolmo caadi ah iyo 11 tolmo oo qurxin ah. Awooddu wax yar bay ka hoosaysaa tii aynu isticmaalnay, maadaama ay leedahay 65W oo keliya. Dabcan, waxay leedahay iftiin si loo fududeeyo aagga shaqada iyo naqshad qumman oo raaxo leh. Dhererka iyo ballaca tolid kasta waa la sii go'aamiyay.
Qiimaha mishiinkani waa ilaa 189 euro oo aad awoodid halkan ka iibso.
Toyota ECO26C - mashiinka...
Ma fududahay in loo helo qaybo ka mid ah mishiinnada tolidda Toyota?
Waa run in mararka qaarkood aan ogaano inaan u baahanahay qaybo ka mid ah qalabka toyota mashiinada tolida meel aan u jeednona ma naqaano. Waxaa laga yaabaa in aysan ahayn kuwo la awoodi karo sida noocyada kale, laakiin maanta dhab ahaantii maahan wax adag in la helo.
Maadaama aad tagi karto dukaan kasta oo u heellan hagaajinta mishiinnada noocaan ah halkaasna waxaad ka heli doontaa waxaad raadineyso. Laakiin haddii aadan rabin inaad ka guurto guriga, markaa waxaad u adeegsan doontaa dukaamaysiga waaweyn sida Amazon oo dhexdeeda, waxaad yeelan doontaa xulashooyin badan oo kala duwan.
Si dhammaantood, aad u sii wadato isticmaalka mishiinka tolida muddo dheer.
Sida loo doorto irbad ku habboon mashiinka tolista Toyota
Waa in la sheegaa in dhammaan kuwa bilaabay adduunka ee mashiinnada dharka, waxaa fiican in had iyo jeer la bilaabo cirbadaha caalamiga ah, ilaa aad ka ogaato in aad rabto in aad kala duwanaato oo aad la qabsato maryaha waxaad baranayso. Taasi waa sababta aan halkaas ku yeelan doono kala duwanaansho irbadaha. Sababtoo ah kuwani waa inay salaxaan marada oo aanay waxyeello u geysan.
Sababtan awgeed, had iyo jeer waxaa habboon in la iibsado cirbadaha tayada leh. Tan iyo ujeedadaas awgeed waxaan hubineynaa in dhammaynta ay ka fiican tahay iyo in ay aad u adkaysanayaan. Taasi waa sababta ay u jiraan noocyo badan oo suuq ah oo ay noqon karaan ku habboon mashiinkaaga tolida Toyota. Waa muhiim inaad hubiso tilmaamaha mashiinkaaga sababtoo ah waa meesha nooc ka mid ah miiska uu la imaan doono dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan cirbadaha.
Dhanka kale, waa inaad ogaataa inaan haysano irbado keli ah, laba-jibbaaran iyo saddex-geesood ah. Tani waxay ka dhigan tahay in kuwa ugu horreeya ay yihiin kuwa ugu fudud, labanlaabyadu waxay qabtaan hawlo yar oo gaar ah halka kuwa saddexaad ay yihiin kuwa lagu qurxiyo. Intaa waxaa dheer, waa waqtigii laga hadli lahaa dhumucda iyo xajmiga. Waxay had iyo jeer u qalmaan laba lambar oo ka ugu horreeya waa midka u dhigma cabbirka Yurub, sidaas darteed waxay muujinayaan dhumucda aan u baahanahay. Tusaale ahaan, kan ugu fiican wuxuu noqon doonaa 60/8 halka 120/120 uu noqon doono mid ka soo horjeeda iyo dhar dhab ah oo qaro weyn.
Marka, si aad u bilawdo, waxaad yeelan kartaa dhowr cirbadaha caalamiga ah oo leh caarad wareegsan kuwaas oo ku habboon suufka ama linenka. In kasta oo had iyo jeer la xasuusto lambaradooda si aad u ogaato nooca dharka loo isticmaalo iyaga: Laga bilaabo 60 ilaa 75 waxaad u isticmaali kartaa blouses ama muslin. Halka 75 iyo 90 aad horeba uga shaqayn karto gogosha ama gogosha. Iyada oo tiro badan oo badan waxaan mar hore ka hadlaynaa dhar dhumuc weyn sida jooniska.
Halka laga soo dejiyo buug-gacmeedka mashiinka tolista Toyota
Haddii mashiinka tolida Toyota uusan kaaga tagin buug-gacmeedka qaybta qalabka, sidoo kale warqad ama CD, ka dibna xusuusnow in aad sidoo kale kala soo bixi kartaa iyada oo loo marayo internetka iyada oo loo marayo website-ka rasmiga ah ee brand ee, sida caadiga ah dhacdaa in kiisaskan, kaliya by gelinaya model ah waxa ka mid ah, hubaal dhawr fursadood ayaa soo bixi doona iyo dhowr luqadood, sidoo kale.
Iyadoo aan la iloobin in sidoo kale ay jiraan muuqaallo sharraxaadyo kala duwan oo YouTube ah iyadoo ku xiran nooca mishiinka su'aasha.
Fikradayda ku saabsan mishiinnada tolidda Toyota
Mid ka mid ah qodobbada ugu fiican ee mashiinnada tolidda Toyota ay leeyihiin waa in ay ujeeddooyin u leeyihiin ma aha oo kaliya kuwa bilowga ah, laakiin waxay sii socdaan hal tallaabo oo dheeraad ah. Taasi waa sababta ay caan ku yihiin inay ka mid yihiin kuwa ugu badan mashiinada dheereeya oo ma khaldana. Shaki la'aan, waa wax soo jiidanaya dareenka ka dib markii uu magacyo kale ku lahaa guriga. Marka laga soo tago xawaarahan iyo saxnaanta shaqadooda, waxa aan aad uga helay tayada agabkooda.
Shaki la'aan, waa calaamad ku xiran tayada oo ka muuqata dhammayntooda iyo halabuurkooda. Maadaama aan ka heli karno birta aan fiicnayn iyo sidoo kale aluminium oo dhamaystiraya mid kasta oo ka mid ah mashiinnada. Isagoo la joogay mid iyaga ka mid ah in ka badan 12 sano, waxay mar hore siisay dhul ku filan si loo hubiyo wax kasta oo aan hadda soo sheegay. Qodob kale oo aynaan ka tagin ayaa ah qiimaha, laakiin xaaladdan waa in aynaan gacmahayaga kor u qaadin madaxa.
Maadaama mashiinada tolida Toyota ay ina siinayaan qiimo aad u fiican, kaas oo la qabsan doona baahiyahayaga iyo jeebkayada. Markaa mid aasaasiga ah, sida kayga oo kale, waad awoodaa wax weyn samee inta badan shaqooyinka aad maskaxda ku hayso. Ahaanshaha ergonomic, raaxada ayaa sidoo kale ku jiri doonta dhinacaaga waxayna badanaa yihiin kuwo aad u fudud oo dareen leh marka la isticmaalo.
Mashiinka dharka » Toyoto tolida
6 faallooyin ku saabsan "Mashiinnada dharka toyota"
January 14, 2020 at 2:36 subaxnimo
Waxaan haystaa mishiinka TOYOTA ZIGLINE AUTO 22, waxaan u baahanahay inaan u helo qaybo ka mid ah agabka...hadii qofna garan karo meesha aan ka heli karo bakhaar ama guri wakiil oo u dhow Villavicencio, waan u mahadcelin lahaa...
10-ka May, 2020 saacaddu markay tahay 6:36 pm
Ma jiraa mashiinka tolida Toyota, Model: tol fudud? Xagee ka heli karaa?
Juun 7, 2020 markay ahayd 8:39 pm
Hello, waxaan raadinayaa mashiinka tolida, toyota tolo fudud ama wax la mid ah, mahadsanid
Noofambar 11, 2020 saacaddu markay ahayd 6:47 pm
Hello, waxaan xiiseynayaa mashiinkan. Waxaan u baahanahay inaan tolo dhar laastikada ah, oo aad u jilicsan, miyay u qalantaa tan?
13-ka May, 2021 saacaddu markay tahay 6:59 pm
Mashiinnada Toyota waxa kaliya oo lagu iibiyaa Amazon oo ay gabaabsi yihiin
Halkee baan ka iibsan karaa oo aan ahayn Amazon?
Hello Pilar, meelaha ay ka midka yihiin El Corte Inglés ama Mediamarkt waxay inta badan haystaan ​​kaydka astaanta, laakiin helitaanka sidoo kale waa mid aad u yar.